MYANMAR-POLITICS/BURNINGAn aerial view of Bin village of the Mingin Township in Sagaing region after villagers say it was set ablaze by the Myanmar military, in Myanmar February 3, 2022. Picture taken February 3, 2022. Picture taken withadrone. REUTERS/
စစ်ကောင်စီက မကွေးတိုင်းနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းတွေက တချို့နေရာတွေမှာ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး တွေ လုပ်နေပြီး မကွေးတိုင်း လက်ယက်မ ကျေးရွာ မှာတော့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ပြန်ထွက်ခွါသွားချိန်မှာ မီးလောင်သေဆုံးနေတဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေ တွေ့ရတယ်လို့ ရွာခံတွေက ပြောပါတယ်။ ကိုရဲမွန် ကေ ပြာပြပေးမှာပါ။
စစ်ကောင်စီက မကွေးတိုင်းနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းတွေက တချို့နေရာတွေမှာ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး တွေ လုပ်နေပြီး မကွေးတိုင်း လက်ယက်မ ကျေးရွာ မှာတော့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ပြန်ထွက်ခွါသွားချိန်မှာ မီးလောင်သေဆုံးနေတဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေ တွေ့ရတယ်လို့ ရွာခံတွေက ပြောပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက ကနီမြို့နယ်မှာတော့ တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီး ဖြစ်ပွါးနေပါတယ်။ ရန်ကုန်က ပေးပို့တဲ့ သတင်းကို ကိုရဲမွန် ကေ ပြာပြပေးမှာပါ။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့နယ် ထဲက အိမ်ခြေ ၁၈၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ လက်ယက်မ ကျေးရွာကို မေလ ၁၄ ရက်နေ့က စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ဝင်ရောက်လာပြီး နေအိမ်တွေကို မီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက် နေအိမ် ၁၀၀၀ ကျော် မီးလောင်ကျွမ်းသွားပြီး မတ်လ ၁၆ ရက် တနင်္လာနေ့အထိ မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ နေအိမ်တွေကို ငြိမ်းသတ်နေရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ပြန်ထွက်ခွါ သွားတဲ့ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာတော့ မီးလောင်ကျွမ်းပြီးသေဆုံးနေတဲ့ အရပ်သား ၂ ဦးကို တွေ့ခဲ့ရပြီး မတ်လ ၁၆ ရက် နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့ နောက်ထပ် ၄ လောင်း ကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ လက်ယက်မ ရွာသားတဦးက VOA ကို ပြောပါတယ်။
“လက်ရှိအနေအထားအရ စစ်ကြောင်းက အနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အတွက် မီးလောင်တာ အတိအကျတော့ မသိရသေးဘူး။ မီးဝင်ငြိမ်းလိုက် ပြန်ထွက်လိုက် လုပ်နေရတယ်။ တောက်လျှောက်ဝင်ပြီး ငြိမ်းမရသေးဘူး အခုချိန်ထိ။ လက်ရှိအချိန်ထိ အိမ်ထဲကတွေ့တာ လူသေအလောင်း ၁ လောင်း အိမ်သာထဲမှာတွေ့တာက ၁ လောင်း။ လောလောဆယ် ၂ လောင်းတွေ့ထားတယ်။ ၁ လောင်းက နဖူးမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာလိုမျိုး ခွက်ဝင်နေတာ တွေ့ရတယ် မီးလောင်ပြီး။ နောက်တလောင်းက ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တော့မတွေ့ရဘူး။ မီးလောင်ပြီးသေနေတာ။ ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ ကန်တကန်ရှိတယ်။ ဒီညနေမှသိရတာ အဲ့ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ လူသေအလောင်း ၄ လောင်း။ ဒီနေ့တင်မှ သတ်ထားတဲ့ပုံစံ။ အဲ့မှာ စစ်ကြောင်းကရှိနေတော့ ကျွန်တော်တို့ သွားမသယ်ရဲဘူး။ အဲ့ ၄ လောင်းကို။ အဲ့ ၄ လောင်းထဲက ၁ လောင်းကိုတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာသိရပြီ ။ ကျန်တဲ့ ၃ ယောက်က မသိရသေးဘူး။”
မေ ၁၂ ရက်မှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ဒေသခံကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မေ ၁၄ ရက်မှာစစ်ကောင်စီက လက်ယက်မကျေးရွာထဲက နေအိမ်တွေကို မီးရှို့ခဲ့တာလို့ ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ရွာက ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားချိန်မှာ ဒေသခံအချို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ လက်ယက်မကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားတွေဟာ နီးစပ်ရာ တောတောင်တွေထဲ ခိုလှုံနေရပြီး အခုဆို သူတို့ ဒေသမှာ ဒုက္ခသည် ဦးရေက ၆ ထောင်နီးပါးရှိနေပြီး အကူအညီတွေလည်း လိုအပ်နေတယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
အနားက စစ်ကိုင်းတိုင်း ကနီမြို့နယ်ထဲမှာလည်း စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ၂ ရက်ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွါးနေတယ်လို့ ကနီဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ မေလ ၁၅ ရက်မှာ ချောင်းမရွာအနီးနဲ့ မေ ၁၆ ရက်မှာတော့ သမင်ခြံကျေးရွာအနီးတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့  ဒေသခံကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူ တဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။
“၁၅ ရက်နေ့မှာ ချောင်းမရွာကိုဝင်တယ်။ ချောင်းမရွာကို ခဏပဲဝင်ပြီး တခါတည်းပြန်ထွက်တော့ ချောင်းမရွာအလွန်မှာ တိုက်ပွဲတပွဲဖြစ်တယ်။ မနေ့က စုစုပေါင်း ၃ ကြိမ်ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့မနက်ခင်း ၆ နာရီခွဲလောက် တပွဲဖြစ်တယ်။ သမင်ခြံရဲ့အရှေ့ဘက်မှာ သမင်ခြံရွာရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာဖြစ်တာ။ ကျောက်စိမ်းတင်လာတဲ့ Flat သင်္ဘောတွေကလည်း ကလေးဝဘက်ကနေ ဆင်းလာပြီ။ ကနီနယ်ကို မြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက် ကာဗာပေးတဲ့အနေနဲ့ ကနီနယ်ကို လုံးဖို့လို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သုံးသပ်ထားတယ်။”
ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းပေါ်က ကနီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာတွေကို စစ်ကောင်စီက မကြာခဏဆိုသလို နယ်မြေရှင်းလင်းရေး လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချင်းတွင်းမြစ်ထဲ စစ်ကောင်စီရဲ့ ကျောက်စိမ်းနဲ့ လက်နက် ၊ ရိက္ခာသယ်ယူတဲ့ သင်္ဘောတွေဟာလည်း မကြာမကြာ အတိုက်ခိုက်ခံရတာပါ။
မကှေးနဲ့ စဈကိုငျးတိုငျးထဲက စဈကောငျစီရဲ့ နယျမွရှေငျးလငျးရေး
စဈကောငျစီက မကှေးတိုငျးနဲ့ စဈကိုငျးတိုငျးတှကေ တခြို့နရောတှမှော နယျမွရှေငျးလငျးရေး တှေ လုပျနပွေီး မကှေးတိုငျး လကျယကျမ ကြေးရှာ မှာတော့ စဈကောငျစီတပျတှေ ပွနျထှကျခှါသှားခြိနျမှာ မီးလောငျသဆေုံးနတေဲ့ ရှာသားတှရေဲ့ ရုပျအလောငျးတှေ တှရေ့တယျလို့ ရှာခံတှကေ ပွောပါတယျ။ စဈကိုငျးတိုငျးထဲက ကနီမွို့နယျမှာတော့ တိုကျပှဲတှဆေကျပွီး ဖွဈပှါးနပေါတယျ။ ရနျကုနျက ပေးပို့တဲ့ သတငျးကို ကိုရဲမှနျ ကေ ပွာပွပေးမှာပါ။
မကှေးတိုငျးဒသေကွီး မွိုငျမွို့နယျ ထဲက အိမျခွေ ၁၈၀၀ ကြျောရှိတဲ့ လကျယကျမ ကြေးရှာကို မလေ ၁၄ ရကျနကေ့ စဈကောငျစီတပျတှေ ဝငျရောကျလာပွီး နအေိမျတှကေို မီးရှို့ခဲ့တဲ့အတှကျ နအေိမျ ၁၀၀၀ ကြျော မီးလောငျကြှမျးသှားပွီး မတျလ ၁၆ ရကျ တနင်ျလာနအေ့ထိ မီးလောငျကြှမျးတဲ့ နအေိမျတှကေို ငွိမျးသတျနရေတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ စဈကောငျစီတပျတှေ ပွနျထှကျခှါ သှားတဲ့ မတျလ ၁၅ ရကျနမှေ့ာတော့ မီးလောငျကြှမျးပွီးသဆေုံးနတေဲ့ အရပျသား ၂ ဦးကို တှခေဲ့ရပွီး မတျလ ၁၆ ရကျ နလေ့ညျပိုငျးမှာတော့ နောကျထပျ ၄ လောငျး ကို တှခေဲ့ရတယျလို့ လကျယကျမ ရှာသားတဦးက VOA ကို ပွောပါတယျ။
“လကျရှိအနအေထားအရ စဈကွောငျးက အနားပတျဝနျးကငျြမှာရှိနတေဲ့အတှကျ မီးလောငျတာ အတိအကတြော့ မသိရသေးဘူး။ မီးဝငျငွိမျးလိုကျ ပွနျထှကျလိုကျ လုပျနရေတယျ။ တောကျလြှောကျဝငျပွီး ငွိမျးမရသေးဘူး အခုခြိနျထိ။ လကျရှိအခြိနျထိ အိမျထဲကတှတေ့ာ လူသအေလောငျး ၁ လောငျး အိမျသာထဲမှာတှတေ့ာက ၁ လောငျး။ လောလောဆယျ ၂ လောငျးတှထေ့ားတယျ။ ၁ လောငျးက နဖူးမှာ သနေတျဒဏျရာလိုမြိုး ခှကျဝငျနတော တှရေ့တယျ မီးလောငျပွီး။ နောကျတလောငျးက ဒဏျရာဒဏျခကျြတော့မတှရေ့ဘူး။ မီးလောငျပွီးသနေတော။ ကြှနျတျောတို့ရှာရဲ့ အရှဘေ့ကျမှာ ကနျတကနျရှိတယျ။ ဒီညနမှေသိရတာ အဲ့ကနျဘောငျပျေါမှာ လူသအေလောငျး ၄ လောငျး။ ဒီနတေ့ငျမှ သတျထားတဲ့ပုံစံ။ အဲ့မှာ စဈကွောငျးကရှိနတေော့ ကြှနျတျောတို့ သှားမသယျရဲဘူး။ အဲ့ ၄ လောငျးကို။ အဲ့ ၄ လောငျးထဲက ၁ လောငျးကိုတော့ ဘယျသူဘယျဝါဆိုတာသိရပွီ ။ ကနျြတဲ့ ၃ ယောကျက မသိရသေးဘူး။”
မေ ၁၂ ရကျမှာ စဈကောငျစီနဲ့ ဒသေခံကာကှယျရေး တပျဖှဲ့တို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ပွီး မေ ၁၄ ရကျမှာစဈကောငျစီက လကျယကျမကြေးရှာထဲက နအေိမျတှကေို မီးရှို့ခဲ့တာလို့ ဒသေခံတှကေပွောပါတယျ။ စဈကောငျစီတပျတှေ ရှာက ပွနျလညျထှကျခှါသှားခြိနျမှာ ဒသေခံအခြို့ကိုလညျး ဖမျးဆီးသှားတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။ လကျယကျမကြေးရှာသူ ကြေးရှာသားတှဟော နီးစပျရာ တောတောငျတှထေဲ ခိုလှုံနရေပွီး အခုဆို သူတို့ ဒသေမှာ ဒုက်ခသညျ ဦးရကေ ၆ ထောငျနီးပါးရှိနပွေီး အကူအညီတှလေညျး လိုအပျနတေယျလို့ ရှာသားတှကေ ပွောပါတယျ။
အနားက စဈကိုငျးတိုငျး ကနီမွို့နယျထဲမှာလညျး စဈကောငျစီတပျတှနေဲ့ ဒသေခံကာကှယျရေးတပျဖှဲ့တှကွေား တိုကျပှဲတှေ ၂ ရကျဆကျတိုကျ ဖွဈပှါးနတေယျလို့ ကနီဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ မလေ ၁၅ ရကျမှာ ခြောငျးမရှာအနီးနဲ့ မေ ၁၆ ရကျမှာတော့ သမငျခွံကြေးရှာအနီးတှမှော တိုကျပှဲတှဖွေဈပှားခဲ့တာလို့ ဒသေခံကာကှယျရေး တပျဖှဲ့တာဝနျရှိသူ တဦးက အခုလိုပွောပါတယျ။
“၁၅ ရကျနမှေ့ာ ခြောငျးမရှာကိုဝငျတယျ။ ခြောငျးမရှာကို ခဏပဲဝငျပွီး တခါတညျးပွနျထှကျတော့ ခြောငျးမရှာအလှနျမှာ တိုကျပှဲတပှဲဖွဈတယျ။ မနကေ့ စုစုပေါငျး ၃ ကွိမျဖွဈတယျ။ ဒီနမေ့နကျခငျး ၆ နာရီခှဲလောကျ တပှဲဖွဈတယျ။ သမငျခွံရဲ့အရှဘေ့ကျမှာ သမငျခွံရှာရဲ့ အရှဘေ့ကျမှာဖွဈတာ။ ကြောကျစိမျးတငျလာတဲ့ Flat သင်ျဘောတှကေလညျး ကလေးဝဘကျကနေ ဆငျးလာပွီ။ ကနီနယျကို မွဈကွောငျးလုံခွုံရေးအတှကျ ကာဗာပေးတဲ့အနနေဲ့ ကနီနယျကို လုံးဖို့လို့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ သုံးသပျထားတယျ။”
ခငျြးတှငျးမွဈကွောငျးပျေါက ကနီမွို့နယျထဲမှာရှိတဲ့ ကြေးရှာတှကေို စဈကောငျစီက မကွာခဏဆိုသလို နယျမွရှေငျးလငျးရေး လုပျနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒီခငျြးတှငျးမွဈထဲ စဈကောငျစီရဲ့ ကြောကျစိမျးနဲ့ လကျနကျ ၊ ရိက်ခာသယျယူတဲ့ သင်ျဘောတှဟောလညျး မကွာမကွာ အတိုကျခိုကျခံရတာပါ။